राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई प्रश्न : शासनसत्तामा पुगेपछि के गर्ने ? «
राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई प्रश्न : शासनसत्तामा पुगेपछि के गर्ने ?
राजनीतिमा नयाँ उभार आएको छ । सहरदेखि गाउँसम्म नयाँदेखि पुराना गरी विभिन्न राजनीतिक दलका गतिविधि भइरहेका छन् । यसले मतदाता, समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सबैमा उमंग सिर्जना गरेको छ । शान्तिपूर्ण अवस्था विद्यमान रहेकाले विभिन्न राजनीतिक दलमा मानिसहरू खुलेर संगठित भइरहेका छन् । दलका तल्लो एकाइदेखि माथिल्लो एकाइसम्मका विभिन्न पदमा कार्यकर्ता र नेताहरू पुगेका छन् । राजनीतिक दलहरूले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेकाले नयाँ, पुराना सबै नेताले जिम्मेवारी पनि पाइरहेका छन् । महाधिवेशन, अधिवेशन वा सम्मेलन हुने वर्ष तल्लो एकाइदेखि माथिल्लो एकाइसम्म दलका नेतृत्व कतै प्रतिस्पर्धामा त कतै सर्वसम्मतिमा चुनिइरहेको छ । विभिन्न एकाइमा किशोर–किशोरी वयदेखि वृद्ध–वृद्धावस्थासम्म मानिसहरू नेतृत्व वा अनुयायीमा आएका छन् ।
सम्भवतः यही वर्षको अन्त्यतिर हुने स्थानीय तह र अर्को वर्ष हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अहिले नेतृत्वमा आएकाहरू नै स्थानीय, प्रदेश र संघमा क्रमशः वडासदस्य, वडाध्यक्षदेखि अध्यक्ष, प्रमुखदेखि सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति हुनेछन् । यसर्थ संविधान कार्यान्वयनको ६-७ वर्षपछि संघीय शासन व्यवस्थाको दोस्रो कार्यकालमा देशले कस्तो नेतृत्व पाउला वा शासन, सत्तामा को आउला ? निश्चय नै अहिले दलहरूका तल्लो एकाइदेखि माथिल्लो एकाइमा नेतृत्वमा पुगिरहेका व्यक्तिहरू नै आउनेछन् । तिनीहरू देशको शासन, सत्तामा पुगिरहँदा संविधानले परिकल्पना गरेको उन्नत किसिमको समृद्धि, विकास, परिवर्तन र समाजवादको गन्तव्यले सार्थकता पाउला ? भन्ने अहम् सवालमाथि विचार विमर्श आजैबाट गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । दलहरूका विभिन्न मोर्चाका नेतृत्वहरू भोलिका शासक बन्दै गर्दा तिनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण, योजना, सपना, कामको खाकाबारे आजैबाट सोधखोज किन नगर्ने ? तिनले देशमा सुशासन कायम राखी मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सक्लान् ? देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, महँगी नियन्त्रण गर्न सक्लान् ? सदाचारयुक्त शासन चलाउन सक्लान् ? यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रही भैरहवास्थित कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माले लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध नेतृत्वसँग गरेको कुराकानीको सार :
जनताले रोजेको पार्टी, जनतामै समर्पित छौं
नेकपा एमाले, रूपन्देही
अनेक प्रकारका विग्रह, गुट र वैमनस्यलाई चिर्दै एकताबद्ध पार्टीको रूपमा एमाले अगाडि बढेको छ । मुलुकको देशभक्त, प्रगतिशील, अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा एमाले नै देशको मियो बनेर उभिएको छ । यही मियोमाथि अनेक रूपमा यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थी तथा फुटपरस्त अवसरवादीहरूले चौतर्फी हमला गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
एमालेलाई कमजोर नबनाइकन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन भन्ने कुत्सित मनसाय रहेका कतिपय बाह्य शक्तिहरूको समेत आडभरोसाका धमिराहरू पनि छन् । यसलाई चिर्दै एमाले अगाडि बढेको छ । जिल्लाको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म त्यसैमा हामी लागेका छौं ।
जनमतका हिसाबले हामी रूपन्देहीमा पहिलो शक्ति रहँदै आएका छौं र भिजनका हिसाबले पनि रूपन्देहीलाई विकासको रोलमोडल बनाउने काममा हामीले नै अगुवाइ गरिरहेका छौं ।
यहाँका १६ वटै पालिकामा रहेका हाम्रा पार्टी संगठनले त्यहाँका जनताका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम गरिरहेका छन् । जहाँसम्म रूपन्देहीको पार्टी संगठनको कुरा छ, यहाँ अहिले करिब २५ हजार पार्टीका संगठित सदस्य रहेका छौं । उत्तिकै संख्यामा नयाँ सदस्यताका लागि प्रस्ताव आएको छ र समर्थक कार्यकर्ताहरूको पंक्ति धेरै ठूलो छ ।
अहिले संघीयताको असली कार्यान्वयनमा र रूपन्देहीलाई विकासको रोलमोडल बनाउने, मुलुकको आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने, विश्वमा शान्तिको सन्देश छर्ने महामानव बुद्धको जन्मस्थललाई विश्वकै धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेतर्फ हामीले अगाडि सारेका योजनालाई साकार पार्नुपर्ने काममा हामी लागेका छौं । हामीले आमजनताको समेत छाती चौडा हुने गरी गौरवपूर्ण काम गर्दै आएका छौं । फुट र विग्रहलाई चिर्दै देश र जनताको पक्षमा यहाँ नेकपा एमाले अघि बढिरहेको छ । रूपन्देहीमा पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा एमाले नै स्थापित छ ।
स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्पष्ट भिजनका साथ जनताको पहिलो आधारभूत सरकारका रूपमा आ–आफ्ना पालिकालाई सेवाकेन्द्र बनाएर काम गरिरहेको अवस्था छ । रूपन्देहीका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनवटा क्षेत्रमा एमालेले सानदार मतका साथ जित हासिल गरेको छ । यहाँका प्रदेशसभाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा क्षेत्रमा जित हासिल गरेको थियो ।
गएको स्थानीय चुनावमा पालिकाहरूमा बुटवल उपमहानगर, सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा एमालेले सानदार जित हसिल गरेको छ ।
यस्तै देवदह नगरपालिकामा उपप्रमुखसहित बहुमत पदमा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । गाउँपालिकाहरूमा कञ्चन गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकामा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । कतिपय गाउँपालिकाका केही वडामा एमालेबाट जनप्रतिनिधि विजयी भएका हुन् । यी पालिकाहरूमा आवधिक र दीर्घकालीन महŒवका योजना छनोट गर्ने, पालिकालाई सेवाकेन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने, समृद्धिका आधार तयार पारेर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त नीति र कार्यक्रम बनाउने काम भएको छ । रूपन्देहीको जिल्ला समन्वय समितिमा हाम्रो पार्टीका नेता एकराज विश्वकर्माले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
पार्टीमा विग्रह ल्याउने र त्यसैका आधारमा कार्यकर्तामा विभाजन ल्याउने कोसिस पनि भएका छन् । तर, रूपन्देहीमा विभाजनको असर परेको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह भनेकै एमाले हो भन्ने बुझेका तमाम कार्यकर्ताको साथ पार्टीमा छ । अबको जिल्ला अधिवेशनले चयन गर्ने नेतृत्वले हजारौैंको संख्यामा रहेका कार्यकर्ता, हजारौं हजारको संख्यामा रहेका समर्थकहरूको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नेछ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र उद्देश्यमा अविचलित भएर जनताका पक्षमा दृढताका साथ उभिनेछ । समाजवादको आधार निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । रूपन्देहीका १६ वटै पालिका, यहाँका सबै शाखा कमिटीहरू र विभागहरूमा आबद्ध सबै कमरेडहरूलाई एकताबद्ध पार्टी निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्छु । जनताले रोजेको, चाहेको पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हौ, निकट भविष्यमा आउन लागेको स्थानीय निर्वाचन होस् या अन्य निर्वाचन हाम्रो लक्ष्य १ नम्बर हुनु नै हो ।
संगठन मजबुत र स्थानीय निर्वाचनमा जित हाम्रो लक्ष्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, रूपन्देही
अन्य राजनीतिक दलहरूजस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म अधिवेशन भएका छन् । केन्द्रीय महाअधिवेशन अहिले काठमाडौँमा भएको छ । हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दा अहिले हामीहरूले धेरै युवा वर्गहरूलाई पार्टीमा स्थान दिएका छौं । पदाधिकारीमा पनि धेरै ५० वर्षमुनिका हुनुहुन्छ । अबको विकल्प भनेको युवाहरूको नै हो, अबको केही वर्षमा युवापुस्ताले राप्रपाको बागडोर सम्हाल्ने निश्चित छ ।
अहिले हामी संगठनलाई मजबुत, दह्रो नगरी काम छैन । त्यसैले हामी पार्टीको मजबुतीतर्फ लागेका छौं, पार्टी तल्लो तहबाटै बलियो भए सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिले हामीले सबै राम्रो किसिमबाट बुथदेखि जिल्ला नेतृत्वसम्म युवाहरूलाई भित्र्याएका छौं । जिल्लादेखि प्रदेशसम्म र महिलाहरूलाई पनि संविधान, विधानअनुसार प्रतिनिधित्व गराएका छौं । हामी सबैलाई समेटेर अघि बढेका छौं । अब पुरानो तरिकाले पार्टी चल्दैन भनेर सबैलाई थाहा भइसक्यो ।
पार्टी संगठनसँगै हाम्रो लक्ष्य स्थानीय निर्वाचन हो । अहिले स्थानीय निर्वाचनमा हामी जुन अवस्थामा छौं, त्यसमा भन्दा अधिक धेरै स्थानीय तहमा हामी पुग्नेछौं । स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी हामी अघि बढेका छौं । स्थानीय तहमा अहिले उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यसहित ३५ जनाको उपस्थिति रूपन्देहीका पालिकामा हाम्रो पार्टीको रहेको छ । धेरै गाउँपालिकाको मुख्य तहमा जित हात पार्ने गरी हामी संगठन विस्तारमा लागेका छौं ।
अबको निर्वाचनमा नयाँ व्यक्तिले पनि प्राथमिकता पाउनेछन्, साथै पुराना अनुभवी र निर्वाचितहरूले पनि अवसर पाउनुहुनेछ । अन्य राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचनमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने विचार अहिले त्यस्तो केही गरिएको छैन, पहिला हाम्रो आफ्नो खुट्टा नै बलियो बनाउनुप¥यो नि, हामी त्यसमै लागेका छौं । सायद नेपालमै अहिले राप्रपा मात्र यस्तो पार्टी हो, जुन पार्टीमा गुट–उपगुट भन्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन । हाम्रो जिल्लामा पनि त्यस्तो गुट–उपगुट भन्ने केही छैन । युवा साथीहरू पार्टी संगठन विस्तारमा लाग्नुभएको छ । विगतमा भन्दा अहिले पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण पनि निकै राम्रो छ । आशा छ, हामी विगतमा भन्दा धेरै राम्रो गर्नेछौं , रूपन्देही जिल्लामा मात्र नभई राप्रपाको अवस्था पूरै देशभरमा राम्रो हुनेछ । यो निश्चित छ, किनकि अहिले हामी जग बलियो बनाई अघि बढिसकेका छौं । यसको नतिजा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिनेछ । म जिल्लामा जनताको सेवा गर्न बसेको हुँदा केन्द्रीय पदमा मेरो कुनै लोभ लालच छैन, म जिल्लामै खुसी छु ।
शक्ति निर्माणमा लागेका छौं
जिल्ला इन्चार्ज, नेकपा (समाजवादी), रूपन्देही
हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत (समाजवादी) निर्माण भर्खर भएको हो । सामाजिक न्याय, विवेक र जनतालाई सही मार्ग देखाउने र जनताका समस्यालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य र अभिभारासहित हामी अघि बढेका हौं । नेपालको राजनीतिमा जुन गलत प्रक्रिया, विसंगति देखा परे त्यसलाई हटाउँदै जनताका माग, एजेन्डा समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी अघि बढेका छौं । हामी अहिले शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा छौं, नयाँ पार्टी भएकाले संगठन विस्तारका लागि अघि बढेका छौं । हामी अहिले तल्लो तहबाटै संरचना निर्माणका लागि जुटिरहेका छौं । जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ, हामी त्यसमा लागेका छौं ।
हाम्रो पार्टीमा हाम्रो पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई जसले आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न मन पराउँछ, उनीहरू हाम्रो पार्टीमा आउन सक्छन् । हामी राम्रो, हाम्रोभन्दा पनि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम मन पराउने जोसुकै आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ, हामी कसैलाई निषेध गर्दैनौं । निकट भविष्यमा स्थानीय निर्वाचन पनि हुँदैछ । हामी भर्खर खुलेको पार्टी भएकाले हामी शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा छौं, पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौं, निर्वाचनमा कहाँ, कसरी, कोसित मिलेर हाम्रो स्थान राम्रो हुन्छ र जनताको माग सम्बोधन हुन्छ, त्यो कुरालाई आत्मसात् गरेर सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं ।
हामी समाजमा स्थापित, राम्रो छवि भएका, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा अघि बढाउँछौं, ल्याउन चाहन्छौं, जुन एमाले, कांग्रेस पार्टीमा देखिएका विसंगतिहरू छन् नि, त्यो नदोहोरिने गरी हामी नयाँ ढंगले संगठन मजबुत बनाउँछौं । त्यो भोलि बिहान व्यवहारमा देखिनेछ । हामी बदनामी कमाएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा ल्याउँदैनौं । तर, जो आए पनि हाम्रो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम मान्नुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचन होस् वा अन्य कुनै निर्वाचन होस्, हामी एक्लै लड्ने स्थानमा एक्लै लड्छौं, कहीं संयुक्त मोर्चा बनाएर लड्नुपर्ने हुन्छ । परिस्थिति हेरेर स्थानीय तह हेरेर कोसित मिल्नुपर्छ, त्यो समयले देखाउँछ । तर हाम्रो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रममा सहमति राख्नेसँग मात्रै एकता हुन्छ, कुनै स्वार्थका लागि कोहीसित एकता हुँदैन ।
अरू दलहरूको सम्बन्धमा हामी गुण र दोषको आधारमा विरोध र समर्थन गर्छौंं । हामी कसैप्रति आग्रह र विग्रह राखेर काम गर्दैनौं । हाम्रो पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई आत्मसात् गर्दै आउने जोसुकै पनि सक्नुहुन्छ, हामी निषेधको राजनीति गर्दैनौं । तर, अहिलेका दलहरूले विगतमा जुन गल्ती राजनीतिमा गरे, जुन विसंगतिहरू भित्र्याए, हामी त्यस्तो कहिल्यै गर्दैनौं, हामी भनेको जनतालाई सही मार्ग देखाउन, जनताका माग सम्बोधन गर्न र समस्या समाधानका लागि अघि बढेका छौं । अहिलेको लक्ष्य भनेको मजबुत संगठन निर्माण र त्यसपछि स्थानीय र अन्य निर्वाचन हो । हामीप्रति जनताको धेरै आशा छ, हामी त्यो आशा र भरोसालाई तोड्दैनौं ।
आउँदो निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित छ
तिरबहादुर रोका मगर (डार्बिन)
क्षेत्र नम्बर ३ इन्चार्ज, नेकपा माओवादी केन्द्र, रूपन्देही
बहुआयामिक जिल्लाका रूपमा रहेको रूपन्देहीमा हाम्रो पार्टी संगठनको हिसाबले होस् या जनतामा लोकप्रियताको हिसाबले होस्, अरू राजनीतिक दलको भन्दा कम छैन । हामीहरू पनि अहिले केन्द्रीय अधिवेशन लक्षित गर्दै पालिकाहरूको वडास्तरबाटै अधिवेशन सुरु गरिरहेका छौं ।
देशका सबै स्थानीय तहका वडा सम्मेलन सफलतापूर्वक भएजस्तै हामीले रूपन्देहीमा पनि हाम्रो होइन राम्रो, कुशल नेतृत्व वडास्तरबाटै चयन गरेका छौं । अब आउँदो शनिबार पालिकास्तरीय अधिवेशनले पनि वडास्तरमै जस्तो कुशल एवं क्षमतावान् नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
पार्टी केन्द्रको विधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप महिलाको ३५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत र भूगोल समुदायअनुसार अब बाँकी अधिवेशनमा चयन हुनेछन् ।
हाम्रो रूपन्देहीका पालिकाहरूको अधिवेशन मंसिर १८ गते सम्पन्न हुँदैछ, ती सम्मेलनबाट पनि निष्ठावान्, जनप्रेमी र क्रान्तिकारी नेतृत्व चयन हुनेमा म विश्वस्त छु । किनभने हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन, सबै पार्टीका अधिवेशनहरू भइरहेका छन्, यसो हेर्दा सबैका अधिवेशनहरू आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई कसरी जिताउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ सबै पार्टीका नेतृत्व चयन भएका छन् । त्यसकारण हामीले पनि हाम्रो अधिवेशनबाट आगामी स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिको संघीय एवं प्रदेशको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई कुन नेतृत्व आउँदा विजयी गराउन सकिन्छ, सोहीअनुरूप सर्व सहमतिमा क्षमतावान् नेतृत्व चयन गर्नेछौं ।
सबै पार्टीले अधिवेशनहरू गरिरहेका छन् । तर, अरू राजनीतिक पार्टी र हाम्रो पार्टीको अधिवेशन फरक छ । त्यो फरक अथवा भिन्नता के हो भने अन्य राजनीतिक दलहरू कसैले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्छन्, कसैले पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा विश्लेषण गर्छन् अधिवेशनलाई र आ–आफ्नो प्यानल बनाई विभिन्न गुट–उपगुट जन्माउने गरी अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा गर्छन् । कार्यक्रममा आएका प्रतिनिधिहरूमै तिक्तता, दुस्मनी, हानाहान, काटाकाटको स्थिति बनाउँछन् । तर, हाम्रो पार्टीमा यस्तो प्रकारको विधि छैन र अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा हुँदैन । किनभने हाम्रो संगठनात्मक विधि भनेको जनवादी केन्द्रीयता हो । यसैको जगमा टेकेरै हाम्रो सम्मेलन र अधिवेशनहरू हुने गर्छन्, जसमा पूर्णतः उच्चतम जनवादको प्रयोग हामीले गर्छौं, जसमा हाम्रो कुनै प्यानल, गुट–उपगुट हुँदैन र विधानविपरीत हामी जाँदैनौं । त्यसकारण अरू पार्टी र हाम्रो पार्टीको सम्मेलन र अधिवेशनहरूमा आकाश–जमिनको फरक छ । पार्टीको भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनहरूको गठन प्रक्रियाबाट पनि कुशल नेतृत्व नै चयन गर्छौं । हाम्रो अधिवेशनबाट निपूण, हैसियत र क्षमताको बीचमा अन्तरविरोध नहुने खालको आउनुहुन्छ । त्यस्तो नेतृत्वले मात्रै पार्टी संगठन निर्माण र जनपक्षीय कार्य सम्पादन गर्न सक्छ ।
आगामी निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई नै मतदान गरी विजय गराउनेछन् ।
यसका केही कारण छन् । विगत लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, सबैलाई आज राज्यको पहुँचमा पु-याउने व्यवस्थाको जन्म दाता नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) हो । आज राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अनिवार्य महिला, सभामुख वा उपसभामुख अनिवार्य महिला, ७ सय ५३ पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख अनिवार्य महिला हुनुपर्ने र राज्यको पहुँचमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाको जन्मकर्ता हुनुको नाताले र गएको स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचनमा ७ सय ५३ पालिकाको निर्वाचनको नतिजा पनि हेरौं, महिला प्रतिनिधि १५ हजार ७ सय ५० जना र दलित प्रतिनिधि ६ हजार ७ सय ४३ जना, सीमान्तकृत लोपोन्मुख अल्पसंख्यक प्रतिनिधि ७ हजार ४ सय ९६ जना प्रतिनिधित्व भएका छन्, तीन तहको सरकारको पहुँचमा पु-याएकै माओवादी केन्द्रका कारणले गर्दा हो, यो सबै कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । साथै, अर्को कुरो के पनि बुझेका छन् भने अब माओवादी केन्द्रले विजय प्राप्त गरेन भने अहिले प्राप्त भएको सम्पूर्ण अधिकार सबै गुम्नेछ ।
त्यसकारण अब सिङ्गो देशमै माओवादी केन्द्रले विजय गर्नेमा मैले विश्वास लिएको छु । हाम्रो लक्ष्य पार्टी वडादेखि केन्द्रसम्म कुशल क्षमतावान् नेतृत्व चयन, संगठन मजबुत र स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उत्कृष्ट परिणाम ल्याउने हो ।